ဖားကန့် ရွှေမှော်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပိုမိုများပြားလာ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ဖားကန့် ရွှေမှော်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပိုမိုများပြားလာ
ဖားကန့် ရွှေမှော်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပိုမိုများပြားလာ	ဖနိဒါ	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၀ မိနစ်	ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း ယုဇန ကုမ္ပဏီမှ သိမ်းယူထားသော မြေနေရာပေါ်ရှိ ကိုင်းတောမှော် ၂ မှ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် အနီးတဝိုက်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ အလွန်များပြားလျက် ရှိလာသည်ဟု ဒေသခံများနှင့် ကချင်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့ KDNG မှ ပြောသည်။“ရွှေတူးနေလို့ လယ်မြေတွေ ပျက်စီးသွားပြီ။ အဲဒီရွှေမှော်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြန့်လာတယ်။ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်၊ ကလေး၊ လူကြီး ဘိန်းမဲ(ခတ်ပုံ)၊ ဘိန်းဖြူနဲ့ ယာဘ ဆေးတွေ သုံးစွဲနေကြတယ်။ နောက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ပြည့် တန်ဆာ) လုပ်ငန်းတွေလည်း ရှိလာတယ်။ ဒေသခံ ရဲတွေလည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်။ ငွေပဲ ကောက်စားနေတယ်။ တကယ့် မင်းမဲ့စရိုက် အုပ်ချုပ်ရေးမဲ့ ဖြစ်နေတယ်” ဟု KDNG ၏ ဒု-တာဝန်ခံ ဦးဆာဂျီးက ပြောသည်။ ရွှေမှော်အနီးရှိ ရှရုဇွပ် ကျေးရွာမှ ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူ အိမ်ထောင်စု ၅ဝဝ ခန့်၏ လူဦးရေ ၂,၅ဝဝ တွင်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ များပြားလာသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုရွှေမှော်ကို ယုဇနကုမ္ပဏီနှင့် ရှရုဇွပ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်၍ရွှေတူးဖော်ခွင့် ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ကိုင်းတော်မှော် ၂ အပြင် အောင်လန်၊ ချောင်းဆုံ၊ လောဒ်ဂျာ၊ ဘွမ်ကျန် စသည့် ရွှေမှော်များတွင် ယခင်က ဘိန်းမဲ သုံးစွဲမှုသာ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုမူ ဘိန်းဖြူနှင့် ယာဘ ဆေးပြားများ ပိုမိုသုံးစွဲလာသည်ဟု ရှရုဇွပ်ရွာခံ တဦးကပြောသည်။“အရင်က ဘိန်းမဲပဲ ရှိတယ်။ အခုက ဘိန်းခန်း၊ ဖိုးခန်း၊ ရာမ ဆေးပြားတွေ ပိုများလာတယ်။ ကျနော်တို့ အရမ်း စိတ်ပူပန်နေရတယ်။ စိတ်လည်း မကောင်းဘူး။ ဘယ်သူမှ အုပ်ချုပ်တဲ့ လူမရှိသလို ခံစားနေရတယ်။ ဒု-စရိုက်နေရာ၊ လုယက်မှုနေရာ၊ မဒိန်းမှုထိ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမှ မပြောရဲကြဘူး။ ယုဇန ကုမ္ပဏီက မြေသိမ်းလို့ လုပ်စားမယ့် နေရာမရှိ သလို၊ရွှေတူးလို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက ပိုခက်လာတယ်” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ ရှရုဇွပ်ကျေးရွာမှ နှစ်မိုင်အကွာ ကိုင်းတောမှော် ၂ တွင် ယုဇန ကုမ္ပဏီနှင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနော်ဒီးတို့ကရွှေကျင်းတကျင်းလျှင် ကျပ် ငါးသိန်း၊ ရွှေစက်ဖောင် တဖောင်အတွက် တလလျှင် ကျပ်သုံးသိန်း တောင်းခံ၍ရွှေတူးခွင့် ပြုထားသည်ဟု သူက ပြောသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်နှင့် အလယ်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေ အတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ရွှေတူးဖော်ခွင့် ပြုထားသည်ဟုဆိုသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ထိုလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် မဖော်သေးကြောင်း ရှရုဇွပ်ရွာသားတဦးက ပြောသည်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းအတွင်းမှ ဒေသခံ တောင်သူများပိုင် မြေဧ နှစ်သိန်းကျော်ကို ပီလောပီနံနှင့် ကြံ စိုက်ပျိုးရန်တွက်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဌေးမြင့် ပိုင်သည့် ယုဇန ကုမ္ပဏီက သိမ်းယူခဲ့သည့်အထဲတွင် ဖားကန့်မြို့နယ်မှ အောင်ရာ၊ ရှရုဇွပ်၊ ဘန်ကောက်၊ နမ်ဆန်၊ ဝါရာဇွပ် စသည့် ကျေးရွာများမှ ဧက တထောင်ကျော် လည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ မူးယစ်မှုဖြင့် သံသယရှိသူ ၈၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးရမိထား	ယုဇန ပလာဇာ ပိတ်ရက်မရှိတော့၍ ဈေးအုပ်ချုပ်ရေးအား ဆိုင်ခန်းရှင်များ ဝေဖန်	ဒိန်းမတ် ကုမ္ပဏီကြီးက ဓါတ်မြေသြဇာ စက်ရုံ ထူထောင်လုပ်ကိုင်မည်	မူဆယ်မြို့နယ် အမျိုးသမီးများက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ ၃၀၀ ခန့် အရေးယူခဲ့	တရုတ်အခေါက်ရွှေ အဝင်ရှိ၊ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှင့်အတူ ပြည်တွင်းဈေး အပြိုင်ကျ	ကျောက်ဖြူ အထူးစက်မှုဇုန် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ခြိမ်းခြောက်နေဟု အစီရင်ခံစာဆို	ဂျုံမှုန့်များ ပြည်တွင်းသို့ ပထမဆုံး တရားဝင် တင်သွင်းခွင့်ပြု	Who is Online
We have 71 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved